कोरोनालाई मजाक नबनाउ – Newslines Nepal
कोरोनालाई मजाक नबनाउ
प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:२१
आज मैले एउटा नमिठो भिडियो हेरे मन चसक्क खायो ।
एक जना दाजु घर देखि गेट बाहिर निस्के । खै, के काम थियो ? उहाँको । जब त्यो दाजु घरको गेट देखि बाहिर जानू भयो त्यत्तिकैमा पुलिसको भ्यान साइनर बजाउदै आयो । मैले त्यो भिडियो दोहोर्‍याइ दोहोर्‍याइ हेरे छक्क परे । छक्क पर्नुको एउटै कारण ती दाजुको हर्कत । जब ती दाजुले पुलिसको भ्यानको साइनर सुने तब उनले आफूलाई मस्तिष्क पक्षघात (सि.पि) भएको नाटक हिडेर नेपाल पुलिसलाई चक्मा दिदै हिंडे । अनि सोचे, हे भगवान, कोरोना थोडी अपांगता भएका व्यत्तिलाइ लाग्दैन ? बुझ्दैन किन यो समाज ?
रोगले धनी गरिब अपांग सपाङ भन्दैन । झन् कुरा आयो कोभिड१९ को । अपांगता भएका व्यत्तिलाइ छुट अरुलाई नछुट भन्ने कोरोनाको कुन पन्नमा लेखिएको छ ल भन त मलाई?
यो समयमा सबै सचेत भइ बसम आपतमा सबल र अपांग भन्ने हुदैन । मलाई चिन्ता तिमी जस्तो नौटन्किको होइन मलाई चिन्ता यो देशको अनि आफ्नो स्वास्थ्यको छ । मैले बुझेको कोरोना होस् या त अरु कुनै महामारी या त विश्वमा हुने संकट, प्रभाव त समान हुन्छ नि होइन ? बर्ग र स्तरलाई पनि प्रभाव पर्छ नि होइन र ? अनि विभेद कसरी, अहिले कै अवस्थालाई हेरम के कोरोना भाइरसले अपांगलाई नलाग्ने सपाङलाई लाग्ने भन्ने हुन्छ र? अनि छुट किन अपांगलाई सरकार? समर्थन त सहि कुराका लागि गर न जब अपांग एक्लो हुन्छ । सहारा बन जति खेर पिछडिएका हुन् तर प्लिज यो कठिन घडिमा सबैलाई घर भित्र राख, अपाङ्ग होस् या त सपाङ सबैलाई समान दृश्टिकोणले हेरिदेउ र सबै अपांगता साथीहरुलाइ यो शन्देश “तिमी निरोगी भयौं भने दुनियाँ तिम्रो हुन्छ, साथी भाइ आफन्त सबै तिम्रो हुन्छ, यसरी दुखद: घडिमा तिमी यसलाई मजाक नबनाउ अनि सुन तिम्रो लापरबाहिले तिम्रो नक्कल गरेर ती सबल व्यत्तिहरुलाइ फाइदा लुट्न नदेउ…” घर भित्रै बस स्वस्थ भएर बस सु स्वास्थको कामना ।